Arentum အက်ပ် - Aenti&Laxihub
Arenti အက်ပ်ကို မည်သို့ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရမည်နည်း။
1. Arenti ဒေါင်းလုဒ်စင်တာသို့ ဝင်ရောက်ပြီး သင့်မိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းများတွင် Arenti အက်ပ်ကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန် အောက်ပါခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။
2. သင်သည် App Store သို့မဟုတ် Google Play တွင် အဓိကစကားလုံး "Arenti" ကိုရှာဖွေခြင်းဖြင့် သင့် iPhone သို့မဟုတ် Android ဖုန်းအတွက် Arenti အက်ပ်ကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်နိုင်သည် သို့မဟုတ် အောက်ပါအတိုင်း QR ကုဒ်ကို စကင်န်ဖတ်နိုင်ပါသည်။
Alexa ကို Arenti နှင့် မည်သို့ချိတ်ဆက်ရမည်နည်း။
1. Arenti အက်ပ်တွင် ကွန်ရက်ကို စီစဉ်သတ်မှတ်ပါ။
Arenti သို့မဟုတ် Laxihub ကင်မရာကို စနစ်ထည့်သွင်းပြီး Arenti အက်ပ်ရှိ လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီ ကွန်ရက်ဖွဲ့စည်းပုံကို အပြီးသတ်ပါ။
မှတ်စု:“Front Door Camera” ကဲ့သို့သော အလွယ်တကူ ခွဲခြားသိနိုင်သော စကားလုံးများဖြင့် Arenti App တွင် သင့်ကင်မရာကို အမည်တပ်ရန် ကြိုးစားပါ၊ အထူးစာလုံးများကို မသုံးပါနှင့်။မျက်နှာပြင် Alexa စက်ပစ္စည်း၏ အသုံးပြုသူလက်စွဲ သို့မဟုတ် ပံ့ပိုးပေးထားသည့် ဘာသာစကားများစာရင်းအတွက် ၎င်း၏ သက်ဆိုင်ရာ ဝဘ်စာမျက်နှာကို ကိုးကားနိုင်သည်။
2. သင့်မျက်နှာပြင် Alexa စက်ပစ္စည်းကို စနစ်ထည့်သွင်းပါ။
(Amazon Echo Show သို့မဟုတ် Amazon Echo Spot ကဲ့သို့သော သင်၏စခရင် Alexa စက်ပစ္စည်းကို ပြင်ဆင်ပြီးပါက၊ ဤအဆင့်ကို ကျော်သွားနိုင်ပါသည်။ အောက်ပါညွှန်ကြားချက်များသည် Amazon Alexa iOS အက်ပ်ကို အခြေခံထားခြင်းဖြစ်သည်)
1. သင့်စခရင်ကို Alexa ကိရိယာကို ပါဝါပလပ်ပေါက်တွင် ချိတ်ပါ။
2. စက်၏စခရင်ပေါ်တွင် ဘာသာစကားကိုရွေးချယ်ပါ၊ သင့်စက်ပစ္စည်းကို Wi-Fi ကွန်ရက်တစ်ခုသို့ ချိတ်ဆက်ရယူပါ၊ သင်၏ Amazon အကောင့်သို့ အကောင့်ဝင်ပါ၊ ထို့နောက် Amazon Alexa အက်ပ်ရှိ အကြံပြုချက်များနှင့်အညီ ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံကို အပြီးသတ်ပါ။
3. သင့်မိုဘိုင်းဖုန်းပေါ်တွင် Amazon Alexa အက်ပ်ကိုဖွင့်ပါ။သင်၏ Amazon အကောင့်သို့ အကောင့်ဝင်ပါ၊ ထို့နောက် အောက်ခြေ လမ်းညွှန်ဘားရှိ စက်ပစ္စည်းများကို နှိပ်ပါ၊ စက်ပစ္စည်းကို ထည့်သွင်းထားသည့် GROUP (ဥပမာ ဧည့်ခန်း) ကိုရွေးချယ်ပါ၊ ထို့နောက် ဤ GROUP တွင် သင်၏မျက်နှာပြင် Alexa စက်ပစ္စည်းကို သင်မြင်ရပါမည်။
Google Assistant ကို Arenti နှင့် မည်သို့ချိတ်ဆက်ရမည်နည်း။
မှတ်စု:“Front Door Camera” ကဲ့သို့သော အလွယ်တကူ ခွဲခြားသိနိုင်သော စကားလုံးများဖြင့် Arenti App တွင် သင့်ကင်မရာကို အမည်တပ်ရန် ကြိုးစားပါ၊ အထူးစာလုံးများကို မသုံးပါနှင့်။Google Assistant ပေါင်းစည်းထားသော စပီကာ၏ အသုံးပြုသူလက်စွဲ သို့မဟုတ် ပံ့ပိုးပေးထားသည့် ဘာသာစကားများစာရင်းအတွက် ၎င်း၏ သက်ဆိုင်ရာ ဝဘ်စာမျက်နှာကို ကိုးကားနိုင်ပါသည်။
2. Google Home စက်ပစ္စည်းကို စနစ်ထည့်သွင်းပါ။
(သင်သည် Google Home စပီကာ သို့မဟုတ် Google Nest Hub ကဲ့သို့သော Google Assistant ပေါင်းစပ်ထားသော စက်ပစ္စည်းကို ပြင်ဆင်ပြီးပါက၊ ဤအဆင့်ကို ကျော်သွားနိုင်ပါသည်။ အောက်ပါညွှန်ကြားချက်များသည် Google Home iOS အက်ပ်ကို အခြေခံထားခြင်းဖြစ်သည်)
1. သင့် Google Assistant စက်ကို ပါဝါဖွင့်ထားပြီး Wi-Fi ကွန်ရက်သို့ ချိတ်ဆက်ထားကြောင်း သေချာပါစေ။
2. သင့်မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းပေါ်ရှိ Google Home အက်ပ်ကိုဖွင့်ပါ၊ ညာဘက်အောက်ခြေရှိ စတင်ရန်ကိုနှိပ်ပြီး သင့် Google အကောင့်သို့ အကောင့်ဝင်ပါ၊ ထို့နောက် သင့်မိုဘိုင်းဖုန်းမျက်နှာပြင်၏အလယ်ရှိ “စတင်ရန်” ကိုနှိပ်ပါ။
ဖုန်းသည် နှိုးစက်တွန်းသည့် မက်ဆေ့ချ်ကို လက်ခံမရနိုင်ဘူးလား။
Push မက်ဆေ့ဂျ်များကို ပုံမှန်လက်ခံရရှိရန် "Arenti" အက်ပ်၏ တွန်းအားပေးခွင့်ပြုချက်ကို သင်ဖွင့်ထားရန် လိုအပ်သည်။သင်သည် အက်ပ်ကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး ပထမဆုံးအကြိမ် လော့ဂ်အင်ဝင်သောအခါ၊ ခွင့်ပြုချက်ကို ဖွင့်ရန် ပေါ့ပ်အပ်ဝင်းဒိုးတစ်ခုက သင့်ကို အချက်ပြမည်ဖြစ်သည်။၎င်းကိုပိတ်ရန် သင်ရွေးချယ်ပါက၊ သင်သည် ဖုန်းစနစ်ဆက်တင်များ-အကြောင်းကြားချက်များ- "Arenti" ကိုရှာဖွေပြီး အကြောင်းကြားချက်ခွင့်ပြုချက်များကို ဖွင့်ရန် လိုအပ်သည်။
ကျွန်ုပ်၏ဖုန်းတွင် အကြောင်းကြားချက်များကို လက်ခံမရနိုင်ပါ။
အက်ပ်အား ဖုန်းတွင်အသုံးပြုနေပြီဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုပြီး သက်ဆိုင်ရာသတိပေးချက်လုပ်ဆောင်ချက်ကို ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါပြီ၊ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းစနစ်ရှိ မက်ဆေ့ချ်အကြောင်းကြားချက်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာအတည်ပြုချက်ကို ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါပြီ။
APP တွင် စက်ပစ္စည်းကို မည်သို့ပြန်လည်သတ်မှတ်ရမည်နည်း။
အက်ပ်ပေါ်ရှိ စက်ပစ္စည်းကို ဖျက်ပြီး ၎င်းကို ထပ်ထည့်လိုပါက အောက်ပါအတိုင်း လုပ်ဆောင်ပါ။
1- "Settings" စာမျက်နှာသို့ ဝင်ရောက်ရန် "Camera" စာမျက်နှာရှိ ကင်မရာကို နှိပ်ပါ။
2-အောက်ခြေတွင် "Delete" ခလုတ်တစ်ခုရှိသည်။
3- စက်ပစ္စည်းကို အကောင့်မှ ဖယ်ရှားရန် နှိပ်ပါ။
တစ်ချိန်တည်းတွင် အကောင့်တစ်ခုသို့ လူမည်မျှဝင်ရောက်နိုင်သနည်း။
အကောင့်တစ်ခုအား မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းတစ်လုံးနှင့် ကွန်ပျူတာတစ်လုံးမှ တစ်ချိန်တည်းတွင်သာ အကောင့်ဝင်နိုင်ပြီး အခြားလူများသည် မျှဝေမှုယန္တရားမှတစ်ဆင့် ကင်မရာကိုသာ ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
ဆက်တင်များ-နှိုးစက်ဆက်တင်များမှတစ်ဆင့် လှုပ်ရှားမှုရှာဖွေခြင်း/အသံနှိုးစက်ကို ဖွင့်ရန်ရှိမရှိကို သင်ရွေးချယ်နိုင်ပြီး အနိမ့်/အလတ်စား/မြင့်မားသော အာရုံခံနိုင်စွမ်းကို ရွေးချယ်နိုင်သည်။
SD အသံသွင်းခြင်း/cloud အသံဖမ်းခြင်းကို ပြောင်းမလား။
သင့်မေးခွန်းနှင့်ပတ်သက်၍ အဖြေများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
ပင်မစာမျက်နှာတွင် ကြည့်ရှုလိုသော ကင်မရာကို နှိပ်ပါ၊ အကြိုကြည့်ရှုမှု စာမျက်နှာသို့ ဝင်ရောက်ရန်၊ SD ကတ်/တိမ်တိုက်ဖွင့်ခြင်းကို ရွေးချယ်ရန် အောက်ပါမှတ်တမ်းကို နှိပ်ပါ။
အောက်ဖော်ပြပါ ခလုတ်ကို နှိပ်ပြီး Arenti App ကို သင့်မိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းများတွင် တိုက်ရိုက်ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။
သို့မဟုတ် သင်သည် App Store သို့မဟုတ် Google Play တွင် အဓိကစကားလုံး "Arenti" ကိုရှာဖွေခြင်းဖြင့် သင်၏ iPhone သို့မဟုတ် Android ဖုန်းအတွက် Arenti အက်ပ်ကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်နိုင်သည် သို့မဟုတ် အောက်ပါအတိုင်း QR ကုဒ်ကို စကင်န်ဖတ်နိုင်သည်။
push မက်ဆေ့ဂျ်များကို ပုံမှန်လက်ခံရရှိရန် "cloudedge" အက်ပ်၏ push ခွင့်ပြုချက်ကို ဖွင့်ထားရန် လိုအပ်သည်။သင်သည် အက်ပ်ကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး ပထမဆုံးအကြိမ် လော့ဂ်အင်ဝင်သောအခါ၊ ခွင့်ပြုချက်ကို ဖွင့်ရန် ပေါ့ပ်အပ်ဝင်းဒိုးတစ်ခုက သင့်ကို အချက်ပြမည်ဖြစ်သည်။၎င်းကို ပိတ်ရန် သင်ရွေးချယ်ပါက၊ သင်သည် ဖုန်းစနစ်ဆက်တင်များ-အကြောင်းကြားချက်များ- "cloudedge" ကိုရှာဖွေပြီး အကြောင်းကြားချက်ခွင့်ပြုချက်များကို ဖွင့်ရန် လိုအပ်သည်။
EU Add- Zandsteen 50၊ 2132 MR Hoofddorp၊ နယ်သာလန်
CN Add- အဆောက်အဦ 1၊ အမှတ် 768 Jianghong လမ်း၊ Hangzhou၊ PRC
Arenti သည် Focal Tech ကို Local Distri...
Arenti သည် Ingram Micro ကို Local Dis...
Arenti သည် Xtech ကို Local Distributo အဖြစ်ခန့်အပ်သည်...
Arenti သည် CCET Co., Ltd. ကို Loca...
Arenti သည် Visiotech ကို၎င်း၏ဒေသအဖြစ်ကြေငြာသည်...
Arenti သည် iF DESIGN AWARD 2021 ကို ရရှိခဲ့သည်။
© မူပိုင်ခွင့် 20202021 : All Rights Reserved. > Hot Products များ ဆိုက်မြေပုံ AMP မိုဘိုင်း
ဘက်ထရီအားသုံး ကြိုးမဲ့ ပြင်ပလုံခြုံရေးကင်မရာ သုံးသပ်ချက်များ Wifi Camera Wifi စောင့်ကြည့်ကင်မရာ ပြင်ပ Wifi ကင်မရာစနစ် ကြိုးမဲ့ကင်မရာ အိမ်ကင်မရာစနစ်